Toddobaadkii ugu dambeeyey bishii Agoosto ee sannadkan (2005) ayaan kula kulmay Nayroobi; isaga oo markaas u ballansan inuu, saddex maalmood dabadood, u duulo Columbus, Ohio. Wuxuu ku guuleystey inuu ka mid noqdo Soomaalida boqollaalka ah ee bishii ama labadii biloodba mar halkan dayuuradaha lagaga guro; iyada oo aad mooddo in dadkana dhulka laga xaalufinayo, ka dib markii dhirtii laga xaalufiyey!
Waxaan kula kaftamay: “Yamyamow, adiguna ma haddaad Maraykan u qaxaysaa?”. Suu wuxuu ku jawaabey: “Oo sidee baan yeelaa, haddii aan 15 sano ka dhur-sugaayey, wanaag ka soo socdaana uusan ii muuqan…laakiin, kolley, dal shisheeye in badan kuma negaan doonee, waan ka soo noqonayaa markaan reerka geeyo, aniguna aan ka soo helo waraaqo lagu sodcaali karo”.
Cabdulqaadir Xirsi Siyaad oo Yamyam ku magac dheeraa, reerkii wuu geeyey. Laakiin isagu, wax la sheego, Maraykan kuma noolaan. Wuxuu ku geeriyoodey isaga oo aan 2 biloodna ku negaan:
Qoys iyo qaraabo ka sokow, bulshada suugaanta ayaa si weyn u tebi doonta. Waddaniyadda haatanba dadkeenna gabaabsiga ku ah ayaa maqnaanshihiisa u sii naafan doonta. Saaxiibbadiisii gaar ahaaneed ka sokow, maansadiisii murtida badnayd intii ku jeclayd ayaa sannado u ilmayn doonta.
Geeriduse kala qoob culuse, tiisu waa khasaare ummadeed. Si dhab ah berri markii wax loo qiimeeyo ayaa la ogaan doonaa meesha hore ee uu kaga jirey maansoyahannadii Soomaalida u soo baxay soddonkii sano ee qarnigii 20d u dambeeyey. Aragtidayda, wuxuu ka mid ahaa, tiro ahaan, hal-abuurro bulshadeenna ku sii yaraanaya oo kulansaday hibada hal-abuurnimo iyo kasmo ballaaran oo hiddaha ummadda iyo af-soomaaliga ay u leeyihiin.
Marxuum: Abwaan Cabduqaadir Xirsi yayam
Sababahaas dartood ayay dad badan oo na wada yaqiini geerida Yamyam iiga tacsiyeen. Tacsiyayn keliyase kuma ay ekaane, waxay isla markaasba iga durraansanayeen, af ama qoraal ahaan, inaan wax uga iraahdo isaga qof ahaantiisii iyo, guud ahaanba, ujeeddooyinkii ugu muuqa dheeraa ee uu maansadiisa u xanbaarin jirey. Kaasina wuxuu ila noqday ummadda aan ku abtirsadaa codsi ay gar iigu leedahay iyo waajib ay tahay inaan ka soo dhalaalo oo saaxiibkayga geeriyoodey uu si walba iiga mudan yahay.
Haddiiba waxaan la ashqaraaray hibada curinta maanso oo gabayaagan da’da yari uu ku hubaysnaa. Hadalka caadiga ahi siduu intayadii kale ugu fududaa ayay abuurka tuducyada gabaygu isaga ugu fududaayeen! Markiiba waxaan ogaadey inuu ‘gole-ka-fuul’ yahay: hal-abuur halka uu joogo isaga oo aan ka dhaqaaqin soo if-bixin kara maansadii uu doono ama ay saaxiibbadu ka doonaan!
Taasina waxay ii sii caddaatay sannadkii 1974kii markii isaga iyo anigu aan gudo-galnay hawlihii suugaaneed ee wadajirka aannu u qabannay tii ugu horraysey. Waxay ahayd riwaayaddii aannu u bixinnay “Dabkuu shiday Darwiishkii” ee ku saabsanayd waayaha dhaqdhaqaaqii gobannimoddoonka Soomaaliyeed ee Sayid Maxamad Cabdille Xasan uu hoggaamiyey intii u dhexaysey 1895 ilaa 1920kii.
Markaas buu yiri: “Waxaan kuu yeerinayaa ergooyinka shirka Baarliin gabayadii iyo geeraarradii ay ku wada hadli lahaayeen…u horraysii ergeyga Jarmalka ee martida loo yahay!”.
Galabtaas ayuu saacado yar gudahood wuxuu ku dhammeeyey tixaha riwaayadda ku jira ee aragga 1d (First Scene); tixaha ku saabsan kulankii Baarliin ee xoogaggii Yurubta-galbeed ay 1884-1885kii Afrika ku hooshayeen.
Markaan dib u xusuusto galabtaas iyo dhaqsihii meerisyada gabayada uu iigu soo tuuraayey ayaan isula ekaadaa arday damiinnimo iyo gacan-culays isku darsaday oo macallin degdegsani uu cashar u yeerinaayo!!
Tilmaamaha wanwanaagsan ee maansoyahanka waxaa ka mid ah geesinnimada. Isaga ayaa ku dhiirrada wax, inta badan, aan dadka kale ku dhiirran karin. Marar badan isaga ayaa naftiisa biimo ugu talin kara, si waxa laabtiisa ka guuxaaya uu u soo dibed-bixiyo.
Hase ahaatee, maansoyahannada qudhoodu taas kama wada sinna. Qaar baa halka loo badan yahay wax uga dillaama. Qaar baa kolba kii duubku u xiran yahay gar iyo gardarroba ku raaca; iyaga oo lafahooda uga baqaya amaba anfaco ka jeeqaaqaya. Qaar kale, tolka ay ka dhasheen ayay addoon u noqdaan. Gefba ha ahaatee, talada ay qoladiisu maantaas u xaglinayso ayay ula xagliyaan, ‘maya’ inay yiraahdaanna kuma dhacaan! Qaar kale naftooda uun bay u daneeyaan, halkii runta iyo wanaagga bulshadooda ay uga danayn lahaayeen.
Awoodda curinta maansaduba ha ku daabacnaatee, hal-abuurrada kuwa caynkaas ahi dadka kama dhex-qarsoomaan. Haba qurux badnaatee, maansadoodu ma soo dhaafto xilligii la tiriyey iyo meeshii lagu tiriyey toona, maxaa yeelay waxaa ka maqan dareenkii runta ahaa ee waarin lahaa. Maansadoodu ma hanaqaaddo, maxaa yeelay waxay ka dhalatay carrabkii dalabta lahaa ee la sheegay lugaha dalabta leh in laga garan og yahay!
Ha yeeshee, waayihiisu sida ay inoo muujinayaan, Yamyam waa gabayaa dhiirran. Sida aan u aqiin, waa gabayaa waxa uu rumaysan yahay aan ka leexleexan karin, xataa hadduu ku tashado inuu isyeelyeelo ama iscandadawlo!
Dhinaca kale, gabayaagu wuxuu gar u leeyahay tixihiisa inuu u adeegsado, fal iyo hadal, kolba wixii dareenkiisa dhaqaajiya. Wuxuu xaq u leeyahay cidduu doono inuu maansadiisa ku ammaano, mar walbase waxaa shardi ah inay run ka tahay oo aan dad kale carrabka la lahayn, lana kireysan!
Si kastaba ha ahaatee, wax ugu wacnaaba, hal-abuurradii ka biyo-diidey ammaanta madaxdii dalka ee xilligaasi waxay u qaybsameen:
--qaar iska aamusay; iyo
--qaar dan moodey inay tiriyaan heeso sarbeeban oo dadweynuhu aanu ujeeddadooda la bixi karin, siyaabo kala duwanna loo qaadan karo.
Sannadkii 1974kii ayuu Yamyam caddeeyey inuu saddexdaas qoloba ka duwan yahay. Wuxuu taariikhda gashaday geesinnimo layaab leh markii uu falanqeeyey gefafkii siyaasadeed ee ka dhashay maamul-xumadii isa soo taraysey, asii in kor loogu dheeraysto aan markaas cidina ku dhici karin!
Sannadkaas ayuu tiriyey saddexda gabay ee la kala yiraahdo: Weriye, Qaran iyo Run Dhegeyso oo dhammaantood xanbaarsanaa dhalliilo toos ah; isaga oo tirinaaya goldaloolo wixii maalintaas u muuqanaayey. Madaxdii dalka ayuu ku canbaareeyey siday uga weecdeen 1969kii waddadii ay ku ballan-qaadeen inay ummadda qaadsiin doonaan: waddadii hufnaanta maamulka, waddadii horumarka, waddadii daryeelka nolosha dadweynaha…
Isaga oo aan u sarbeeban, ammaanna aan ka hormarin wuxuu ahaa gabayaagii ku dhiirradey inuu yiraahdo:
Tusaale kale oo dhiirranaantiisa inoo muujin karaa waxa uu yahay tuduc gabay ah oo ku beegan 1980kii. Waxay ahayd 21kii Oktoobar, maantaasna waxaa loo dabbaaldegaayey sannadguuradii 11d ee Kacaanka.
Allaha u naxariistee, madaxweyne Maxamad Siyaad Barre khudbaddii uu maalintaas ummadda u jeediyey waxa uu daaha kaga qaaday qorshe cusub oo uu laba-kaclayn ku magcaabay. Waxaa lagu macneeyey: tallaabo, dul iyo hoos, lagu hagaajinayo maamulkii dalka ka jirey, wixii qaldamayna lagu turxaan-bixin doono.
Yamyam, haddiiba qorshahaas shaki baa ka galay. Wuxuu, malaha, garan waayey, madax iyo aragtiba, iyada oo wax waliba ay sidoodii hore yihiin sida ay laba-kaclayni u suuraggeli karayso!
Kolkaas buu, fagaarihii dabbaaldegga annaga oo aan wax badan ka soo fogaan, wuxuu la soo boodey:
Hibo kasta ha lahaadee, gabayaa waliba wuxuu u baahan yahay inuu wax fiican ka aqoodo dhaqanka bulshada uu ku dhex-nool yahay iyo dadweynaha uu tixihiisa u jeedinaayo. Inay u le’ekaatoba, waa inuu garasho u leeyahay, guul iyo guuldarro, waayaha uu dadka degankiisu soo maray. Waa inuu wax fiican ka yaqaan, wadar ahaan, hiddaha uu dadkiisu ku dhaato. Waxyaabaha la wanaagsan iyo kuwa la qalloocan. Waxa kiciya iyo waxa dejiya. Himilada joogtada ah ee ummaddiisu ay indhaha ku hayso. Cidda ay cadawgeeda u taqaan, iwm…
Haddaba, hiddaha ummadeed ee gabayaagu aanu sina uga maarmi karin waxaa ugu muhiimsan ‘dhaxalkii maanso’ ee hal-abuurradii ka horreeyey ay ka tageen. Hormuudyadii hore gabayadoodii kolkuu wax ka yaqaan ayay kuwiisuna culays yeeshaan. Markaas buu tixihiisa ku qurxin karaa muuqaallo ay dadku garanayaan. Markaas buu ku soo bandhigi karaa sawirro uu maanka kaga xadi karo oo mar uu kaga qoslin karo, mar kale uu kaga oohin karo, mar saddexaadna uu kaga fekarsiin karo!
Da’ ahaan markii loo eego, Yamyam wuxuu ku indho-dillaacsaday iyada oo fikradda Soomaalinnimada uu calanku u babbanaayo. Wuxuu ku barbaaray iyada oo himilooyinka ummadda ay ugu weyn tahay xoraynta iyo midaynta dhulka iyo dadka Soomaaliyeed ee ay gumeysteyaashu kala qaybsadeen, kalana qoqobeen. Wuxuu garaadsaday iyada oo qab-wadareedkii ummaddu uusan dhulka ku dhicin oo Soomalinnimada lagu faano. Wuxuu tabaraystay iyada oo halgamaaga iyo khaa’inka la kala yaqaan oo uu halgamaagu sarreeyo!
Fikradahaas ayuu ku koray. Iyaga ayaa ku weynaadey. Iyaga ayaa maankiisa ku gaamurey. Taana waxaad ka dhadhansan kartaa dhammaan maansadiisa dal-jacaylka ku saabsan. Gaar ahaanse waxa aan kuugu tilmaami lahaa gabaygiisii Gaawoon, kuwiisii guubaabada iyo dagaal-gelinta daarranaa, kuna aaddanaa dagaalkii Soomaaliya & Itoobiya ee 1977-‘78kii, heestiisii Soomaali baan ahay iyo miinleydii murugada badnayd ee uu ka mariyey shirkii dib-u-heshiisiinta ee 1993kii magaalada Addis Ababa Soomaalida loogu qabtay...
Wuxuu iska ilaalin jirey inay lugaha uga marmaan dabinnadii isaga oo kale ay madaxdu u dhigi jirtey. Markaas buu wuxuu doortay inuu madax-bannaanaado, si ay maansadiisuna u madax-bannaanaato!
Hanjabaad iyo hunguri-gelinba, wuxuu ahaa nin lagu soo loodin waayey. Taasina waxay sabab u noqotay gabayadiisa inay ku jiri waayaan tuducyo uu isagu mirahooda leeyahay, hase ahaatee ay ujeeddadoodu maan dad kale ka soo maaxatey! 1979kii, isaga oo maansadiisa ku halqabsanaya, innagana, malaha, iskeen baraya waa kii lahaa:
AASKII MARXUUM YAMYAM | Columbus, Ohio, USA
Marxuum yamyam waxa uu ka tagay 6 caruur ah oo kan ugu wayn uu jiro 21 kan ugu yarina 7 jir ( Magacyaduudu yihiin: Raage, qamaan , absame , ibraahim, Ayaan iyo samawada iyo hooyadood ambiya c jamaac.) waxayna dhamaantood joogaan Columbus Ohio. ILAAHAY SAMIR IYO IIMAAN HANAGA SIIYO..
Wuxuu ahaa hal-abuur wixii uu aammino aan ka leexleexan karin. Ma ahayn gabayaa dareenkiisa cabburin karey oo, sababo isaga ka baxsan dartood, dib ugu dhigan karey.
Si walba wuxuu uga duwanaa hal-abuurro kale oo, qaran-jabkii Soomaaliya ka dib, iyagu doortay inay ku ururaan halkii ay hortii ku dhasheen. Hal-abuurro u nuglaadey hindisaha jilibbada ay ka soo jeedaan. Hal-abuurro gar iyo gardarroba ku raacay waxa uu tolkood rabo. Hal-abuurro ku kufriyey midnimadii ummadda ee, waayo hore, ay sheegan jireen inay u taagan yihiin!
Aragtidayda, maansoyahan waliba, isaga oo nool, wuxuu dhintaa kolkii af iyo uur kala jira lagu barto! Sidii ruux diblomaasi ah markuu u dhaqmo ayaa loo yaabaa! Laba-wejiile ayay bulshadiisu u aqoonsataa. Waxaa laga wada jeestaa markuu u ranbaso diktatooriyadda madaxda siyaasadda iyo cadaadiska xagga tolka uga yimaada. ‘Qoor-iyo-xero-laawe’ ayaa lagu sheegaa kolkuu oggolaado in la hoggaamiyo, halkii uu isagu wax ka hoggaamin lahaa!
Haddaba, waayihiisa haddii loo fiirsado, intaas oo goldaloolo ah cidina Yamyam kuma xaman karto. Waxaa daliil kuu ah dhawr-iyo-tobankii sano ee u dambeeyey habkii uu u noolaa, halkii uu ku dhaqnaa iyo maansadii uu tiriyey ujeeddooyin wixii ay lahayd.
(Axmed F. Cali “Idaajaa”)
Abwaan Yam-Yam oo ku Geeriyoodey Shil Gaari
Waxaa dalka Mareykanka gaar ahaan Gobalka Ohio shil baabuur ku geeryooday Allaha u naxariistee C/qaadir xirsi (Yam yam) oo... Guji... Oct 22
Dhanbaalkii Cabdirisaaq Xaaji Xuseen oo AfSoomaali Loo Rogey
Tarjumadii: Idaajaa | Nov 18, 2002
Qore: Idaajaa | Aug 4, 2003